I-RFID Wristband / Abathengisi bebracelet kunye nefektri | I-China RFID Wristband / Bracelet Abavelisi
ukufikelela kwilaphu lekitikiti ilaphu nfc ibhanti yesihlahla rfid ilaphu lomsitho wristbands umnyhadala wesongo
Iibhanti ezolukiweyo zeRFID, ezikwabizwa ngokuba yiRFID yelaphu, iiwristband zomnyhadala, iiwristband zomnyhadala weRfid zikhululekile kwaye zihlala zomelele, zixhotyiswe ngesilayidi sobungakanani obulingana nayo yonke into. Ngaba ukusebenzisa ixesha elinye okanye ukusetyenziswa kwakhona kwezinto kuxhomekeke kuhlobo lokutshixa. Isetyenziswa ngokubanzi kwiminyhadala, kwiminyhadala, kwiikonsathi, emathekweni, kwiinkomfa njl. Njl.
Amanzi alahlwayo e-PVC rfid wristband
Iibhanti ze-PVC zineempawu ezizinzileyo, ezingangeni manzi, eziguqukayo, kwaye eziva kamnandi. Banikezelwa kubantu abadala, ulutsha, kunye nobukhulu bomntwana ngeetshipsi ezahlukeneyo. Banokuza baxhotyiswa nge logo yakho, kunye nokukhetha komnye weminikelo yethu emininzi yemibala. Iibhanti zethu ezinxitywa zii-RFID zilungele iiklabhu zobulungu zonyaka, iindawo zokupasa zonyaka, okanye iiklabhu ezikhethekileyo / ze-VIP. Ukongeza, sinokuzilungisa ii-wristbands ngoshicilelo lwesilika, ukwenza i-debossing, kunye ne-embossing.
Abicah Nfc Wristband
I-rfid sililcone wristband ilungele ulwandle, amachibi, iipaki zamanzi, i-spas, ii-gyms, iiklabhu zezemidlalo kunye nayiphi na enye inkqubo yokulawulwa kokufikelela kwi-RFID apho kufuneka i-bracelet ye-nfc engenamanzi. I-rfid silicone wristband yi-IP68 engenamanzi, ehlala ixesha elide, enobubele, enokumelana nobushushu, kunye ne-anti-allergies. Zonke ii-rfid silicone nfc wristbands zethu ziyafumaneka nge-LF 125khz, HF 13.56mhz, UHF 860-960mhz okanye ii-ICs ezihamba rhoqo. Isetyenziswa ngokubanzi kulawulo lokungena emnyango, ulawulo lwamalungu, ukulandela umkhondo wentlawulo, isilwanyana / ukulandelela okulahlekileyo njl. Ubuchule bobugcisa obufana nekhowudi ye-QR eyahlukileyo, inombolo ye-serial, ibhakhowudi, ebhalwe, egxunyekwe, yoshicilelo lwe-laser njl.njl. Zonke izinto zamkelwe kwisacholo se-RFID abicah.
Inayiloni RFID nfc Iwristband
Iibhanti ze-RFID zineempawu ezizinzileyo, ezingenawo manzi, eziguqukayo, kwaye eziva kamnandi. Banikezelwa kubantu abadala, ulutsha, kunye nobukhulu bomntwana ngeetshipsi ezahlukeneyo. Banokuza baxhotyiswa nge logo yakho, kunye nokukhetha komnye weminikelo yethu emininzi yemibala. Iibhanti zethu ze-RFID zilungele iiklabhu zobulungu zonyaka, iindawo zokupasa zonyaka, okanye iiklabhu ezikhethekileyo / ze-VIP. Ukongeza, sinokuzilungisa ii-wristbands ngoshicilelo lwesilika, ukwenza i-debossing, kunye ne-embossing.
Yoluka i-RFID i-nfc wristband ikwabizwa ngokuba yi-elastic ephothiweyo ye-RFID wristband yenziwe nge-Ultra-intofontofo, i-100% yezinto ezipholileyo kunye nokwolulwa okunokuhlengahlengisa kubungakanani besihlahla. I-RFID yolule intambo yesayizi bubungakanani obunokuhlengahlengiswa, bususwe, busetyenziswe kwakhona, kunye nobungqina bamanzi. Ilungele ukusetyenziswa kweentsuku ezininzi okanye iinkqubo zokupasa ixesha.
Ezilahlwayo zeTyvek RFID Wristbands
Iibhanti zebhande zeRFID zinokuba bubungqina bamanzi, zomelele kwaye zinzima kakhulu. Amabhanti e-RFID amaphepha esandla sisisombululo esinexabiso eliphantsi nesikhuselekileyo, esilungele iminyhadala efuna indlela esisiseko kodwa ekhuselekileyo yokuchonga iintlobo ezahlukeneyo zeendwendwe. Iibhanti zewayini zeRFID zihlala zisetyenziswa kwimijuxuzo yasebusuku, kwimivalo nakumaqela.